Afrika: Manolo ny Zava-drehetra ny Fanantenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2019 16:25 GMT
Tia mizara ny traikefany sy maneho ny heviny ny vehivavy, saingy tsy hisy mihitsy famantaranandro hiandry azy ireo hipetraka sy hifampizara ny antsipiriam-piainany – na ataony anatin'ny bilaoginy aza izany. Tsy maintsy mitohy ny fiainana.
Ny Fiainana dia ny enjikenjika sy ny tabataba amin'ireo hetsika andavanandro, ny bitabitaka manoloana ireo zava-baovao, ary ireo fanaintainan'ny fitomboana izay mahatonga antsika te hihanjo eo, kanefa mampianatra antsika kosa fa mila mandroso hatrany isika, na inona na inona miseho manodidina antsika. Rehefa vitantsika ny mizara izay rehetra nianarantsika, hitantsika fa mihoatra ireo sisintany sy kolontsaina ireo traikefa. Tsy vitan'ny hoe afaka mandray lesona avy amin'ny tsirairay isika, fa koa afaka mahatsapa fifandraisana amin'ny tsirairay.
“Voaorina tsara ny fiainana hany ka tsy mifanaraka, ary tsy hifanaraka, amin'ny fanantenana ny zava-mitranga,” hoy i Charlotte Bronte, ary, raha jerena amin'ireo zavatra avoakan'ireo vehivavy Afrikana Kristiana ao amin'ny bilaogin-dry zareo dia mitombina io fanambarana io.
Raiso ho ohatra i Favored Girl. Taorian'ny fihatony nandritra ny telo volana, nanaitra ireo mpankafy azy tamin'ny fomba nahafinaritra izy, miaraka aminà fanavaozam-baovao. Manohy mitantara ny A Girl’s Journey Down the Aisle (Ny Fitsangatsangam-behivavy iray any amin'ny Lalantsara) izy. Toa nivoatra tsikelikely ny bilaoginy, ka lasa Ny Fitsangatsanganam-behivavy iray Ivelan'ny Lalantsara.
Mitantara amintsika ireo “zava-manahirana” tsy maintsy nekeny noho ny fanambadiana i Favored Girl:
Nanara-po niantsena izaho sy ny namako ary nony reraka; nankany aminà toerana fisotroana kafe mba hisakafo kely sy hitafatafa. Raha iny izahay nipetraka iny, nitodika taty amiko izy ary nanontany, “Hono ho'aho ry FG, nisy zavatra tiako hanontaniana anao. Ahoana izany fiainana anaty tokantrano izany?”
Te hamaly ny fanontaniany amin-kitsimpo aho, koa niteny azy fa manome fahafinaretana maro dia maro ny fiainana anaty tokantrano, kanefa misy fanitsiana maro tsy maintsy atao. Nanontany ahy ny momba ireo fanitsiana ireo izy, ary niteny taminy aho fa misy ireo zavatra tsy noeritreretinao mihitsy fony ianao mbola mpitovo niaina irery sy tsy nitontaly afa-tsy ny tenanao manokana. Hoy aho taminy, “Ohatra, tamintsika niantsena teo, tsy maintsy nieritreritra momba ireo akanjo sy atinakanjo novidiako aho, satria misy olona miraharaha ny momba azy ireny”. Nahita izany ho mahatsikaiky tokoa izy ary nilaza fa tsy vitany ny hieritreritra ny hampahafantatra olona iray hafa ireo fanapahankevitra rehetra faran'izay bitika ataony toy ireo akanjo novidiany na izay anaovany anatin'ny akanjony. Nihomehy aho ary niteny taminy fa mila fotoana maharitra vao zatra…
Tsy izay fotsiny. Anivon'ireo zavatra hafa:
Taitra aho indray andro rehefa, tahaka ny mahazatra, naka fahafinaretana indray tolakandro no tonga tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny Ramose ary nilaza fa nikotaba aho ary nila fahanginana sy fandriampahalemana kely izy. Novandravandrako toy ny hoe miteniteny foana izy. Amin'ny fomba ahoana no nahafahany niantso ny hirako ho “kotaba” sy nangataka ahy hamono izany? Tsy fantany angaha fa isan'ireo zavatra tiako indrindra ny mihaino hira? Nifamaly naharitra izahay saingy mbola tsy nahita vahaolana ihany. Tsy azoko an-tsaina tsotra izao ny hamela ny fihainoko hira noho ny aminy. Nanome sosokevitra ny hanaovako écouteurs izy. Nanaiky tsy sazoka aho kanefa tsy nitovy tsotra izao ny fahatsapana azo avy amin'izany. Amin'izao kosa anefa, nianatra namela ny efitrano misy azy aho rehefa mandeha ny hirako. Manararaotra tsara aho rehefa tsy ato an-trano izy ary afaka alefako mafy be araka izay tiako ny hira!
Kay izany olana! Kanefa inona no ratsy kokoa: Olana, sa Fahadisoam-panantenana?
Miresaka momba ny fahadisoana tsapan'ny olona momba ilay antsoiny hoe “fahadisoam-panantenana mitaiza” i mystoriesmytestimonies:
Toa mandroso avokoa ny olon-drehetra. Inona ny olana amiko? Mahatsiaro tena ho diso isika momba ny fahadisoam-panantenana mitaiza antsika. Maninona aho no tsy afaka mianatra hifaly kokoa anatin'ny asako, anatin'ny tokantranoko, anatin'ny trano fivavahako, anatin'ny vondron'ny namako? Hitanao, na dia manao zavatra hafa aza isika, “mandroso amin'ny fiainana”, mbola mibanjina foana ilay fiainana tiantsika an-tsokosoko.
Dia ahoana ny momba ny Henatra sy ny Fanarabiana – mety ho ireo ve no sedra ratsy indrindra eto ambonin'ny tany? Toa miteny i The Girl With A Fro rehefa miresaka momba ireo olana roa ireo fa tsy maninona izany – ny zavatra iombonan'izy roa ireo dia izy samy mankarary.
Miverina aminà toerana nankarary ahy indray aho amin'izao fotoana izao. Toedraharaha iray tany amin'ny lasako izay nandratran'olona iray ahy tokoa, sy ireo fihetsehampo manodidina izay tranga izay…nahatonga ahy harefo dia harefo io fotoana io – ary koa nahatsapa ho tena tsy tiana noho ireo fihetsik'io olona io…
Tsy minia tsy mahita aho fa teo foana Andriamanitra ho ahy ary mbola eo, ary Izy irery ihany no nahafaka ahy tanatin'izany. Ny zavatra toa tsy vitako amin'izao dia ny firosoana amin'ny fiainana. Saika tsapako fa raha tsy resahina indray mandeha tsy miverina ity tranga ity, dia hitaritarika mandrakizay…ary efa an-taona maro izay. Ny fanaovana izany ho toy ny tsy misy dia tsy hanova ny fisiany ary nefa dia izany no ezahan'ilay olona iray hafa hatao…Tsy afaka miaina toy izany aho.
Manana fahendrena vitsivitsy hozaraina i Believer. Manamarika izy fa tsy tokony hitoetra ela amin'ny zavatra lalovantsika isika – écouteurs, fanoharana sy aretimpo – fa kosa amin'ilay FANANTENANA miharihary izay mitsiry amin'ny fahafantarana Ilay tokana ninoantsika ho Mahatoky:
Manontany tena ny zavatra mety ho niseho aho raha….
tsy nanamboatra ilay sambo-fiara i Noa satria nihomehezan'ny olona (Hebreo 11:7)
niraharaha ny taonany i Sarah (Genesisy 21:1-3)
leo i Joba (Joba 14:14)
nisafidy ny tsy hanakatra ny hevitry ny nofin'ilay mpanompo lahy i Josefa (Genesisy 40:6-14)
nifampisakambina tamin'i Orpa i Rota ary niverina tany Moaba (Rota 1:16-17)
tsy nitondra ny fanangonantsoniany teo alohan'ny mpanjaka i Estera (Estera 4:15-16)…
“Aza matahotra satria hisy farany ireo olana atrehintsika ary tsy ho fongana mihitsy ireo fanantenantsika,” hoy izy nanoro tamim-pahendrena. “Ny hany ilaintsika dia ny mihazona amin'Andriamanitra. Marina ny Teniny ary nanome teny ho anao Izy momba ny zavatra iray, tsy mandiso fanantenana mihitsy Izy, na oviana na oviana na oviana.”
Tsy ho vitako mihitsy na oviana na oviana na oviana ny haneho izany tsara kokoa.